बाटोमा हिँड्दा भेटिने यी सात वस्तुबाट सँधै जोगिनुहोस्…. - Nepali in Australia
May 3, 2021 autherLeaveaComment on बाटोमा हिँड्दा भेटिने यी सात वस्तुबाट सँधै जोगिनुहोस्….
हामी घरबाट कतै हिड्ने क्रममा कहिले काहिँ बाटाेमा भेटिने वस्तुहरुमध्ये केही शुभ हुन्छन् भने केही अशुभ पनि हुन्छन् । धर्मशास्त्रअनुसार हामीले यस्ता अपवित्र चिजहरुबाट बँचेर हिड्नु पर्छ । यदी बाटोमा हिँड्दा भूल बश यस्ता चिज छोएमा नुहाएर मात्रै अरु काम गर्नु पर्छ । यसको ख्याल नगरी त्यस्ता चिजहरु छुनाले धेरै प्रकारका दोषहरुले हाम्रो जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छन् । यस्ता अपवित्र सात चिज छन्, जोबाट सँधै जोगिएर हिँड्नु पर्छ ।